Emailada Clinton: Madaxa FBI ayaa laga yaabaa inuu jabiyay sharciga ayuu sheegay hogaamiye sare - BBC News Somali
Emailada Clinton: Madaxa FBI ayaa laga yaabaa inuu jabiyay sharciga ayuu sheegay hogaamiye sare
Image caption Mr Comey ayaa dhaleecayn uga timid xisbiga Dimoqraadiga tallaabada uu qaaday
Hogaamiyaha xisbiga Dimoqraadiga ee Sanateka Maraykanka, ayaa sheegay in madaxa FBI laga yaabo inuu jabiyay sharciga, kadib markii uu sheegay in hayadda ay baarayso emailo laga yaabo inay la xiriiraan Hilary Clinton.
Harry Reid ayaa ku eedeeyay agaasimaha FBI James Comey, inuu jabiyay sharciga ka hortagaya masuuliyiinta inay faragaliyaan ama saamayn ku yeeshaan doorashada.
Warka ay sheegtay FBI ayaa soo baxay in ka yar laba toddobaad inta aan la qaban doorashada.
FBI ayaa heshay ogolaansho ay ku baarto emailada ay leedahay kalkaaliye hore ee Clinton.
Emailada oo ay leedahay Huma Abedin, ayaa la aaminsan yahay in laga helay laptop uu leeyahay ninka ay kala tageen Anthony Weiner, oo ka tirsanaa Congresska.
Waxaa la sheegayaa in 650,000 oo email oo ku jira laptop-ka la baarayo, taasoo dhib ka dhigaysa inay go'aan ay gaaraan baarayaaasha doorashada ka hor.
Mr Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyay Mr Comey inuu qariyay "xog ku saabsan xiriir dhow oo ka dhaxeeya musharaxa Donald Trump, la taliyayaashiisa sare iyo dowladda Ruushka".
"Dadwaynaha waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan xogtan. Waxaan kuu soo qoray bilo ka hor in xogtan loo sheego dadwaynaha" ayuu Mr Reid ku sheegay warqad uu u diray madaxa FBI.
FBI ayaa aaminsan in emailada ay noqon karaan kuwa la xiriira baaritaankii hore ee lagu sameeyay Mrs Clinton, oo u isticmaashay emailkeeda gaarka shaqada markay ka ahayd xoghayaha arrimaha dibadda dowladda Obama.
Baaritaanka ayaa la xiray bishii July iyadoon wax dacwo ah lagu soo oogin Mrs Clinton.
'Taageero hal dhinac '
Warqad uu u diray ayuu Mr Reid ku eedeeyay Mr Comey inuu laba si u dhaqmaayo, iyadoo ujeedadu tahay in xisbi looga eexdo xisbi kale.
Wuxuu sheegay Mr Comey ayaa laga yaabaa inuu jabiyay sharciga Hatch Act, oo ka mamnuucaya masuuliyiinta inay saamayn ku yeeshaan doorashada.
"Taageeradaada halka dhinac, waxaa laga yaabaa inaad jabisay sharciga," ayuu dhahay.
Image caption Hillary Clinton ayaa sheegtay talaabada FBIs inay tahay wax laga walwalo
Waa maxay Hatch Act?
Hatch act, oo la soo saaray 1939, ayaa ka hortagaysa shaqaalaha federaalka inay isticmaalaan awoodooda xilka si ay ugu faa'ideeyaan xisbi gooni ah.
Sharciga ayaa loogu magac daray Senator Carl Hatch ee New Mexico, oo u ololeeyay inuu ka hortago shaqaalaha federaalka dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed inta doorashada ay socoto. Waxaa la badalay 1993 si loo cadeeyo shaqaalaha badankood inay hal dhinac u ololayn karaan markaysan shaqada ku jirin.
Iyadoo ay ka harsan tahay in ka badan toddobaad doorashada 8 November, fikradaha dadka ayaa sheegaya in hogaankii Mrs Clinton ay kaga horaysay Mr Trump ay isku soo dhawaanayaan, fikradaha ayaa la qaaday ka hor intaysan soo bixin emailada eedeymaha.
Fikrado ay aruuriyeen ABC News/Washington Post oo la daabacay Axadii ayaa muujinaya in Mrs Clinton ay boqolkiiba hal horayso.
Waxaa soo baxday Axadii, in wasaarada cadaalada ay ku dhiiri galisay FBI inaysan u sheegin Congresska baaritaanada cusub waqtigan ay doorashada soo dhawdahay.